juin 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
“ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA”
ALAHADY NANAOVANA NY HETSIKA MALAGASY
Alahady farany amin’ity volana jona ity ary hamaranana ny fandinihana izany lohahevitra izany. Alahady natokana ho an’ny taranaka ary ihany koa hankalazana ny Fetim-pirenena eto anivon’ny Fiangonana amin’ny fanomezana lanja izany amin’ny fitafy malagasy. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo no nitondra ny hafatra. Ny vaomiera Aim-panahy no nandrindra ny fanompoam-pivavahana. RAZAFINDRAMAMBA Cynthia sy RAZAFINDRAMAMBA Andry, Diakona avy ao amin’ny vaomiera Asa vavolombelona, no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny sy namaky ny Soratra Masina. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Nisy ny feon-javamaneno nanombohana ny fotoam-pivavahana.
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 33:1-12, 22. Ary natao ny hira FFPM 39:“Faingana Ry Mpanjaka”:1,4,5. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika.
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izany.
Zoky RAZAFIMAHARO Fanja no nitondra ny fampianarana. “Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin’ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin’Ny Raiko eo ambonin’ny seza fiandrianany” Apo.3: 21. Izany no hafatra nentiny. Nitondra tantara fohy izy nentiny nanamafisana sy nanazavana izany.
Natao ny hira FFPM 313: “Miantrà ny firenena“:1, 3 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Ny perikopa anio dia ny 2 Mpanjaka 22: 11-20, Matio 1: 13-19, 1 Korintiana 1:4-9.
Rehefa vita izany famakiana ny Teny izany dia natao ny hira FFPM 179 “Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa”: 1, 3 ary notohizana tamin’ny hafatra.
Ny nitondran’ny Mpitandrina ny hafatra anio dia ny Matio 16:18b: « … ary ambonin’ity vatolampy ity no haoriko ny Fiangonako ».
Manan-danja lehibe eo amin’ny fiainana maha kristiana ity Teny ity. Ho an’ny Fiangonana katolika dia i Petera mihitsy no napetrany ho Pape voalohany.
Amin’izao faha 160 taonan’ny Fiangonana izao, amin’ny maha Alahadin’ny taranaka dia manan-danja lehibe izany Teny izany.
Misy lanjany lehibe izany nanoneranana ny Fiangonana izany. Izany no hitarihana ireo olona mba hanatona ny Tompo. Mba hamaly toy ny navalin’i Petera ny vahoaka ka hanao hoe: « ….Hianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona ». Raha Simona Bar-Jona no anarany teo aloha dia lasa hoe Petera.
Ny dikan’ny teny hoe Petera dia vatolampy. Ny Fiangonana dia fianarana ho antsika hanorenantsika ny finoantsika. Finoana mafy no mampitoetra tsara ny Fiangonana.
Misy dikany ny fanomezana anarana vaovao. Oh. Jakoba dia nitalaho an’Andriamanitra mba hanampy azy ny amin’ny ady izay natrehany dia ny fiadiana tamin’ny rahalahiny. Rehefa nifampitolona taminy izy dia lasa hoe Israely no anarany. Toy izany koa Saoly dia lasa Paoly, rehefa nanenjika ny Tompo izy ka niova fo dia niova ny anarany.
Simona Bar-Jona dia olona tsotra teo aloha. Noho ny fanambarany ny amin’ny Tompo dia lasa Petera no anarany ary nijoro ny Fiangonana avy eo.
Fiangonana ho mafy orina ary ho sahy milaza ny marina sy misedra ny sarotra. Azo antoka ny fototra iorenan’ny Fiangonana satria ny Tompo mihitsy no nametraka izany.
Petera no nanonona voalohany an’i Jesoa ho Mesia sy Kristy. Tonga ny andron’i Mesia teo. Zava-dehibe ny ahalalantsika izany, hoy ny Mpitandrina.
Isika Fiangonana ankehitriny no tokony hanamafy izany fototra izany.
Raha naka ny ohatra tao Korinto ny Mpitandrina dia nilaza fa nivelatra ny Fiangonana tao satria dia Jesoa Kristy hatrany no napetraka ho fototr’izany.
Ny fiovana ho kristiana dia tsy mora. Ny maha kristana dia fiorenana tsara ao amin’i Kristy. Nisaoran’i Paoly an’Andriamanitra izany satria dia niorina tsara tao Aminy izy.
Ho antsika kristiana, mahalala ny zava-misy isika. Eto amintsika dia tsy mora ny mijoro ho kristiana. Misy eso, fandatsana, fanenjehana.
Sambatra izay firenena manana an’i Jehovah ho Andriamaniny.
Mampatanjaka ny Fiangonana koa io fanambaran’ny Tompo. Niteny izany ny Apostoly Petera. Nanamafy ny fanambarany ny Tompo fa hanampy ny hananganana izany Izy Tompo ary indrindra ny amin’ny hiatrehany ny mafy ho sedrainy.
Ny Fiangonana dia hery entin’ny kristiana mandresy ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita. Kristiana rehefa maty dia manantena ny hitoetra amin’ny toerana izay nomaniny. Eo an-tratran’i Abrahama izy ireo no hitoetra, toy ilay jiolahy niara-nohomboana tamin’ny Tompo.
Fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra ny Fiangonana mba hivelarany satria velona ny Tompo.
Namafisin’ny Mpitandrina izany araka ny hita ao amin’ny Mpanjaka 2: 22. Josia no miteny eo. 26 taona izy eto no namaky ny Bokin’ny Lalàna, nahafahany nanitsy ny fomba fitondrany. Hita fa na teo aza ny fikasan’Andriamanitra dia mihaino ny olomboafidiny Izy. Na dia notanterahany aza ny loza, dia tsy nahita ny fahoriana izay nanjo, ny olony.
Nanisy teny momba ny fanaovana ny akanjo gasy moa ny Mpitandrina fa natao izany mba hijoro sy hirehareha fa Malagasy ireo taranaka. Lova sarobidy napetrak’Andriamanitra ho antsika ny maha Malagasy antsika. Malagasy nanorina ny finoana teo amin’ny Fiangonana.
Ny Fiangonana izay tenan’i Kristy dia manana fiombonana tanteraka Aminy ary tena tian’ny Tompo izany.
Eo amin’ny faha 160 taona dia andrasana isika haneho fifaliana fa kristiana ary teo ambonin’ny vatolampy no nanorenan’ny Tompo Azy.
Nisy feon-javamaneno ary nanao ny anjara hirany ny Antoko Mpihira R.F.F
Natao ny Vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra, noho ny tsy fahatanterahan’ izany ary rehefa izany dia nanamafy ny finoana tamin’ny Fanekem-pinoana laharana faha 4.
Nisy feon-javamaneno ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
Alahady heriny dia alahady fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ary hiverina hiditra amin’ny 9 ora ny Fiangonana.
Ny toe-bola nandritra ny herinandro dia mitentina Ar 2 541 100.
Ny mariazy dia nisy toy izao : RAZAFINDRAMBOA Sitraka hampakarin-dRAKOTONIRINA Jean Mario, ny sabotsy 3 jolay, ao amin’ny FJKM Ambatolampy Fahazavana.
Ny 10 jolay 2021 dia hisy ny famoran-jaza faobe karakarain’ny VFL toy ny fanao isan-taona.
11 jolay fanadinana Sekoly alahady, ka ny K1 hatramin’ny K5 dia eto Amparibe Famonjena ihany fa ireo zokiny kosa dia eny Andohalo.
Natao ny Hira FFPM 547: “Ry Jesoa Masoandronay o” nandritra ny rakitra. Nisy moa ireo nanao raki-pisaorana sy voady ka nangataka ny hira FFPM 430:” Endrika sariaka”.
Natao hira fanolorana ny rakitra kosa ny FFPM 4:4 “Mamy ny fitianao“.
Nisy feon-javamaneno mialoha ny Asa vavolombelona. Izany moa dia nitondrana am-bavaka ny taranaka. RAKOTOMANANA Andry, Biraom-piangonana, no nitarika izany, ka ny Deo. 7: 9 no nasainy novakiana satria izany no baikon’Andriamanitra: “Koa aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitrao ihany no andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby”.
Nasaina namaly kosa ny Fiangonana ka namaky ny Josoa 24: 15 “.fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an’i Jehovah izahay”.
Nitondra am-bavaka moa Ramatoa RAHARIJAONA Bodo taorian’izay.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ary nofaranana tamin’ny Rainay Izay any an-danitra izany.
Natao ny FF44: “Ry Madagasikara soa“ and.1, 3, novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano. Natao ny hira: FFPM 734: “Zanahary o, tahio ny Tanindrazanay”:1, 3 ho famaranana ny fotoana. Samy nanao ny vavaka mangina ary nisy ny feon-javamaneno firavana.
Notanterahana avy eo moa ny “Hetsika gasigasy” nokarakarain’ny Komity K160, nisy ny hira nataon’ireo sampana, ny fifaninana kabary sy tantara an-tsehatra. Nisy ihany koa ny filatroana nanehoana indrindra ny fitafy malagasy.
Naka ny sary : RAMIADAMANANA Lovatiana Josian
Nikirakira ny fafana : RAJAOFETRA Arielle
ALAHADY FAHA 20 JONA 2021
ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA
ALAHADIN’NY SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY NY RANTSANA FANANTENANA
“Anaka, atolory ahy ny fonao, Ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako...” Ohabolana 23: 26-35
Ny fotoana androany dia niarahana niombom-bavaka tamin’ny Sampana Vokovoko Manga.
Ivom-bokatry ny SVM rahateo ity fotoana ity ary nentiny ihany koa nanamarihana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenany teto amin’ny Fitandremana.
Alahady natao ho fankalazana ny Fetin’ny ray ihany koa .
Ny Lohahevitra izay banjinin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana Jona ity dia ny hoe : “ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA” .
Ny Filohan’ny Sampana Vokovoko Manga eto amin’ny Fitandremana no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Nisy ny fotoana ankatoky ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ho fiomanam-panahy. Tamin’izany no nanehoana ny raharaha izay nentina teo anatrehan’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo ary anisan’ireny ny fankatoavana ireo Katekomena izay miomana ho amin’ny fanatonana ny latabatry ny Tompo. Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahana sy nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.
RAZAFIMBELO Holy, Diakona, Filohan’ny sampana Vokovoko manga no nitarika ny Fanompoam-pivavahana.
Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny fiarahabana Apostolika ny mpitarika ary nanambara ireo teboka manamarika ity fotoana androany ity dia nampahatsiahy ihany koa ny lohahevitra izay banjinina mandritra ity volana jona ity.
Ny Ohabolana faha 3 and. 16 no nentin’ny mpitarika niarahaba manokana ny ray noho izao fanamarihana ny Fetin’ny ray izao..
Nentina nisaotra sy nidera an’Andriamanitra kosa ny Salamo faha 121: “Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy
Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely.
Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao.
Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.
Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy.
Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay.
Ny Hira FFPM 36:1 ,3 “Moa ho haiko tantaraina” no nohiraina taorian’izany ary avy eo dia niroso tamin’ny vavaka fisaorana ny mpitarika araka izao vavaka izao :
“ Ry Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy masina o! Midera sy mankalaza ny Anaranao izahay, noho ny famirapiratan’ny voninahitrao sy ny fiandriananao. Tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao sy ny famonjenao. Moa ho hainay tantaraina tokoa ve ry Tompo ny fahasoavana izay narotsakao taminay isan’andro indrindra ny amin’ny nitehirizanao ny Sampana Vokovoko Manga nandritra izay 30 taona izay ka nahafahanay niasa sy nijoro ho vavolombelonao. Koa indreto izahay vahoakanao izay narovanao tamin’ny areti-mandringana sy ny endrim-pahafatesana maro. Tsy navelanao ho solafaka ny tongotray, niaro anay tamin’ny ratsy rehetra Ianao. Niambina ny alehanay Ianao. Izany no ahatsapanay ny fiarovanao sy ny fitiavanao tsy misy fetra. Misaotra Anao izahay fa nangoninao ho eto amin’izao fitoerana masina izao, mba ho iray fo, iray saina, iray fanahy Aminao. Misaotra Anao ihany koa izahay ry Tompo raha mbola afaka mahatsiaro ny raim-pianakaviana rehetra nahatratra indray izao Fetin’ny ray izao, mba ho tena ho ray andry iankinan’ny fianakaviana, iankinan’ny Fiangonana, iankinan’ny firenena anie ny ray eto amin’ny Fitandremana ary hazoto amin’ny fanompoana Anao. Ankehitriny Fanahy Masina o! Hatreo feno izao fotoana izao ka mamenoa anay ary mampifantoha anay mba ho voninahitrao Ray, Zanaka ary Fanahy Masina anie izao fanompoana masina tanterahanay izao ka hanovozanay hery sy aina vaovao entinay manompo anao sy hiatrika ny ampitso sy ny androm-piainana izay mbola omenao anay. Amin’ny Anaranao Jesao Kristy Tompo sy Mpamonjy anay no hanandratanay ny vavakay. Amena!
Toy izao kosa no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana, hoy ny Tompo: “Aza miray lasitra amin’izao tontolo izao, fa meteza ovàn’Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amena!”
Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 242 and. 1,4 “Misaotra Anao Izahay ry Ray”
Eo anatrehan’ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy tanteraka isika, ka noho izany dia mila mifona isika mba hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany amin’ny alalan’izao vavaka izao : “Ry Rainay izay any an-danitra o! Raha nandre ny sitraponao izay nambara taminay teo izahay dia miondrika eto anatrehanao , mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay. Tsapanay fa na ny fijerinay na ny fiteninay, na ny fombanay dia samy tsy maneho ny maha kristiana anay. Eo koa ny tahotra, ny fitiavam-boninahitra, ny tsy fahasahiana mijoro ho vavolombelonao . Menatra izahay Jesao, miaraka aminao. Sao dia lazaina fa masina loatra, sao dia lazaina fa mpivavaka be, sao dia lazaina fa marina loatra. Matahotra ny ho voarabiraby izahay. Manoloana an’izany ry Tompo dia miaiky ny fahadisoanay izahay ary mifona Aminao. Mangataka ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy Aminao. Mba handehananay mendrika eo anatrehanao. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany .Amena!”
Ny hira FFPM 444 : 2 “Mivezivezy aho, nitady zava-tsoa” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.
Andriamanitra dia mahari-po sady be famindrampo, tsy mitahiry fahatezerana. Andriamanitra dia Fitiavana ka mandray izay rehetra manatona Azy, koa raiso ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho antsika ankehitriny. Hoy ny Tompo: “Avia ary hifandahatra isika, na dia mena midorehitra aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny jaky aza ireny dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy; kanefa Izaho dia Izaho mihitsy no mamela ny fahadisoanao , ka tsy hotsarovako intsony ny fahadisonao. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina. Amena”.
Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia nohiraina ny hira FF 34 and. 1, 3 “Tompo malala” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharaha fahatelo.
Zoky RAKOTOARISOA Dina , mpampianatra K4 no nanatanteraka izany .
Nivavaka izy ary avy eo nanao tantara kely nentiny nanazavana izay voalaza araka ny Hebreo 10 and. 39 :
“ Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy.”
Taorian’izany dia mbola nivavaka ny tompon’anjara.
TATITRY NY SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY NY RANTSANA FANANTENANA.
RAKOTOARISOA Meva no nanatanteraka izany. Ny Heb. 10: 39a ihany no nentiny niarahaba ny Fiangonana nialoha ny tatitra.
Nizara roa ny tatitra ka teo ny fanambarana ny asan’ny Sampana nandritra ny herintaona.
Teo koa ny fanatanterahana ny hetsika Gasigasy tamin’ny volana Jona 2020; ny fanatanterahana fifampizarana, ny fandraisana anjara tamin’ny Krismasy hafakely. Nandray anjara tamin’ny tafika masina miara-mandroso natao teny Anjanamasina.
Ny volana febroary 2021 izy ireo no nanokatra ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenany, niaraka tamin’ireo Sampana manatanteraka ny taom-pankalazana sy ny komity ny faha 160 taonan’ny Fiangonana.
Nisy ny rindran-kiram- piderana nanehoana ny taom-pankalazana.
Tao anatin’izao ivombokatra izao dia nisy ny famelabelaran-kevitra nalefa tamin’ny FaceBook, nandinihana lohahevitra maro mahakasika indrindra ny fihemorana ara-panahy sy ny vaha-olana amin’izany, ny fandraisana ny andraikitra.
Nisy koa ny hafatra avy amin’ny Vokovoko manga Foibe, izay manentana indrindra ny Fitandremana amin’ny fandraisana anjara fanohanana ny fananganana ny tsangambaton’ny faha 50 taonan’ny Sampana Vokovoko manga .
Ny fihaonam-be dia hotanterahana any Antsirabe ny faha 26-29 aogositra ho avy izao.
Taorian’ny tatitra dia nanatanteraka hira hoe : “Asa mahasoa, ny antsika re” ny SVM.
Ny Biraom-piangonana (BP) RAZAFIMAHARO Mamy no nanatanteraka izany. Ny Teny araka ny 1 Kor. 3: 17b no nentiny niarahaba ny Fiangonana mialoha ny nanambarana ny raharaha.
• Hisy ny famelabelaran-kevitra hotanterahana noho ny faha 25 taona naha Mpitandrina an’Andriamatoa RANAIVONIARIVO Tiana ny alakamisy 01 jolay amin’ny 05.30 ora hariva ao amin’ny FJKM Ambatonakanga
• Misy ireo fotoana tanterahan’ny Synodam-paritany amin’ny herinandro io dia ny ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina ho fankalazana ny faha 25 taona nitandreman’ny Mpitandrina, eo koa ny fandraisan-tanana ny Mpitandrina any amin’ny FJKM Ebenezera.
Hiverina indray ny fanompoam-pivavahana aùmin’ny teny anglisy ao amin’ny Paroisse Internationale Andohalo.
RAKITRA SY VOADY
Ny BP Haja RALAINDIMBY no nanolotra ny voady: • Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny nahafahany nitsabo ny aretina Covid 19. • Tao no nisaotra ny Tompo noho ny famelan-keloka sy ny fanavotany.
Ny hiran’ny Hasin’ny Famonjena : “Tsy mbola nisy” no nangatahan’ny mpianakavy ny finoana androany.
Ny hira FFPM 307:5 “Iza no hazoto mba hiasa moa” no nanolorana ny fanatitra.
Mialoha izany dia notanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 443:1-3: “Raiso ho anao ny foko”
RAVOKATRA Eddy, no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny ary RASOLONDRAIBE Sarobidy kosa no namaky misesy ny perikopa voalahatra hovakiana androany. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Ohabolana 23: 26-35. Ny Testamenta Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Matio 23: 1–12 ary ny Epistily dia ny I Petera 4:1-6.
Tamin’izany no nilazany fa mbola ao anatin’ny fanohizana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA “ isika ankehitriny. Notsiahivany fa ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taona niorenan’ny Fiangonana isika. Ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’ny sampana SVM ihany koa ary ivom-bokany rahateo izao fotoana izao.
Ity fotoana ity dia Fetin’ny raim-pianakaviana ihany koa ka dia faly miarahaba ny ray isika. Ankatoky ny Fetim-pirenena ihany koa izao fotoana izao koa dia hotsarovantsika miaraka ireo fotoana rehetra ireo anio.
Izao no lohahevitra nitondrana izao hafatra izao :
NY KRISTIANA MARINA DIA MIARO NY TENANY AMIN’NY RATSY.
Misy zana-kevitra telo ao anatin’izany :
1- TSY MANAO NY FANAON’NY JENTILISA (1 Pet. 4 :1-6).
Ny olona manana ny fanahin’ny jentilisa dia be fanirian-dratsy, tia fisotroana ary mbola mandala fanompoan-tsampy.
Araka izany, ny Kristiana raha miaro ny tenany amin’ny ratsy dia mandà ireo voalaza ireo. Rehefa ny olona no midoroka dia tsy mahafehy ny tenany intsony. Rehefa milona ao anatin’ny ota ny olona dia alonan’Andriamanitra amin’izany tokoa ahalalany fa tena mpanota izy ary meloka eo anatrehan’ny fahamarinan’Andriamanitra tokoa.
Ny teny fanevan’ny SVM dia ny hoe : “Isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy”.
2- MAHAY MANETRY TENA (Matio 23: 1-12)
Ny fiainan’ny Tompo manontolo manomboka amin’ny fahaterahany ka hatreo amin’ny fahafatesany dia manambara ny fanetren-tena avokoa.
Ny Tompo araka ity perikopa ity dia mitaona ny olona tsy hatoky tena . Rehefa matoky tena mantsy ny olona dia mitarika fialonana ao anatiny izany. Ohatra amin’izany ny toetran’i Myriama izay anabavin’i Mosesy.
Rehefa tsy manetry tena ihany koa ny olona dia lasa manambaka ny namany.
Ny Salamo 33 : 12 “Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny” dia maneho fa ny olona manana an’i Jehovah ho Andriamaniny dia matahotra an’Andriamanitra izy. Ny fahatahorana an’i Jehovah no voaloham-pahendrena. Raha olona te hijoro amin’ny fahendrena izany dia matahotra an’Andriamanitra ka mifady izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Rehefa izany no mitranga dia milamina ny tanàna, tsy misy korontana fa fahasambarana no mitranga.
3- MAHATANA TSARA NY FAHENDRENA AVY ANY AMBONY
“Be hery ny lehilahy hendry, Eny, mitombo hery ny olona manam-pahalalana; Fa ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady,…” Ohabolana 24:5-6
Ny Ohabolana 23:26-35 araka ny perikopa dia mitaona ny hifadian’ny lehilahy hendry ireto zavatra telo ireto:
• Mandositra ny fahajejojejoana . • Mankahala ny tia fahamamoana. • Mihataka lavitra amin’ny fikotranana.
Raha olona hanorina ny maha Kristiana antsika tokoa isika noho ny finoana dia tazomy ny Teny fanevan’ny SVM izay hasandratra ankehitriny manao hoe: “Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy.”
Tao arinan’ny feon’orga dia nanao ny anjara hirany ny STK.
Nisy ny zanaky ny Fiangonana izay nandray ny Sakramentan’ny Batisa dia ny zaza RAKOTONIRINA Lian , teraka ny 05 janoary 2019 , zanak’i RAKOTONIRINA Liva Thierry sy RAKOTOZAFY Lovatiana.
Natao ny vavaka fangatahana. Taorian’izay dia natao ny hira FF 42: 2: “ Moa misy va?” Novakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano. Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FF 42 and 3. Izao fanompoam-pivavahana izao.
Nitendry orga : RANAIVOSON Jacky sy ny SMZM
Naka ny sary :ANDRIAMAMPIANINA Faneva
Alahady faharoa amin’ny volana
Alahady faharoa manaraka ny Trinité Ivom-bokatry ny Hasin’ny Famonjena sy famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taona
Alahady faharoa manaraka ny Trinité ity alahady ity, fitondrana am-bavaka ny Sekoly FJKM, ary eto anivon’ny Fitandremana, dia alahadim-bokatry ny Sampana Hasin’ny Famonjena. Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe: « Anorenana ny maha kristiana ny finoana ».
Fanompoam-pivavahana miavaka ity alahady ity, namaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny Jobily volamenan’ny Hasin’ny Famonjena, ka notendrena nandritra ny fotoana rehetra ny “piano tsangambato”, narahan’ireo mpitendry ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM).
ROBEL Hanitra, Filohan’ny Hasin’ny Famonjena, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.
Litorjia endriny faharoa no notanterahana.
Feon-javamaneno no natao teo am-pidirana ary ny hira “Misaora misaora” an-dRANAIVO RANARIVELO no noventesin’ny Hasin’ny Famonjena teo am-panombohana.
Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia novakin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo faha 100: 1-10, ho fiderana an’Andriamanitra.
Natao ny hira FFPM 21 : « Derao Andriamanitra » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika.
Misaotra sy midera an’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Faly afaka miombom-bavaka. Misaotra noho ny soa rehetra izay tsy takatra akory. Eny, maro ny sedra nolalovana noho ny valanaretina nefa asandratra hatrany ny voninahitr’Andriamanitra.Tafavory mety hitondra ny mavesatra, mety hizara ny hafaliana, mety te hampitombo ny finoana, mety hivavaka fotsiny nefa na inona na inona dia misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana narotsany. Misaotra noho ny fotoam-bokatry ny Hasin’ny Famonjena izay afaka nidera nandritra ny 51 taona.
RABIAZAMAHOLY Léa, mpampianatra ao amin’ny K7, no nanatanteraka izany.
Nanontany izy hoe: “Inona moa ny lohahevitra banjinin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara amin’ity volana jona ity?”
“Anorenana ny maha kristiana ny finoana”.
Ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny II Timoty 1:8a no noraisiny, nentiny nanamafisana ny fanorenana ny maha kristiana: “Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika”.
Nivavaka mialoha ny tantara izay manamafy ny fanorenana ny maha kristiana. Misaotra ny Tompo fa mbola afaka mandray ny Teniny. Mangataka mba ho ny feon’Andriamanitra irery ihany no ho re.
Tantaran’i Mino sy i Faly no nentiny. I Mino dia avy amina fianakaviana kristiana somary sahirana, fa mazoto mivavaka. Ry Faly dia fianakaviana kristiana ihany koa, manan-katao, saingy tsy dia mazoto mivavaka. Indray andro nasain’i Faly nisakafo tany aminy i Mino, koa nanafatrafatra ny renin’i Mino ny amin’ny fahalalam-pomba ary indrindra tsy manadino mivavaka mialoha ny misakafo. Voaroso daholo ny sakafo ary nasain’ny rain’i Faly nihinana i Mino nefa tsy nihinana mihitsy ka nanahy ny rain’i Faly sao misy sakafo tsy tian’i Mino na tsy zakany, na koa, sao dia tsy salama. Tiako daholo ny sakafo, hoy i Mino, saingy tsy mbola nivavaka isika, tsy mbola notahian’ny Tompo ny sakafontsika. Menamenatra avokoa ny rehetra. Nisaotra an’i Mino ny rain’i Faly nampahatsiahy izany ary nitsangana nivavaka izy.
Nitsangana ny Sekoly Alahady rehetra namerina izany Tenin’Andriamanitra izany hijoroana vavolombelona sy hanorenana ny maha kristiana ary nivavaka, nisaotra ny Tompo fa afaka nijoro teo anatrehan’Andriamanitra; mijoro ho vavolombelona na aiza na aiza misy.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 241: 1-4 « Ry Jeso ô! Midina » mialoha ny vakiteny.
ANDRIAMAHADISON Henintsoa no nanolotra ny perikopa voalahatra ao amin’ny Testamenta Taloha : Eksodosy 2 : 1-10, sy Testamenta Vaovao: Jaona 1 : 35-42 ; Romana 12 : 3-8, izay novakiana misesy. Nivavaka izy mialoha ny namakian’i RAKOTOARIVELO Asara ny andalan-tSoratra Masina. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Hasin’ny Famonjena avokoa ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 179: 1 « Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa » mialoha ny toriteny.
Ny Jaona 1: 35-42 no noraisin’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra nakany ny hafatry ny toriteny. Roa alahady izao no nandraisana ny lohahevitra hoe: “Anorenana ny maha kristiana ny finoana”.
Tsy tonga kristiana ny olona raha tsy manana fifandraisana amin’i Jesoa izy, ary fifandraisana mivoatra.
Izany no resahan’i Jaona eto amin’ity perikopa ity.
Ny antsoina hoe kristiana dia izay mandray toriteny ka tonga mpanara-dia an’i Jesoa, ary mijoro vavolombelona amin’ny fiarahany amin’i Jesoa ihany koa ka mitaona olona hafa ho mpanara-dia an’i Jesoa toa azy.
Zavatra telo no vokatry ny toriteny noraisin’ny mpianatra, hita ato amin’ny perikopa:
A- Mpianatra mijery an’i Jesoa
Ny andininy faha 36 no manamarina izany “ary nijery an’ i Jesosy nitsangantsangana izy ka nanao hoe: Indro ny Zanak’ ondrin’ Andriamanitra!”
Ny ataon’ny kristiana dia mibanjina ny maha Izy Azy. Jesoa Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra.
Anarana nomen’i Jaona mpanao batisa io. Mampahatsiahy ny Zanak’ondrin’ny Paska, mampahatsiaro ny fanafahana tany Egypta (Eksodosy 12). Ondry koa no natolotra tao amin’ny Tabernakely, ondry natao fanatitra ho an’Andriamanitra. Ny Mesia no voalaza fa ondry hovonoina mampiseho faharetana, fahoriana sy fahavononana ho faty.
Ny amin’ireo rehetra ireo dia Jesoa no antsoina hoe ondry, tsy manan-tsiny Izy. Fanatitra ho an’ny fahotana Izy. Mamonjy antsika mpanota, raha mibanjina ny maha Izy an’i Jesoa isika dia:
1) Tahaka an’i Jaona izay nitarika ny mpianany tao amin’i Jesoa.
Ny mpitarika dia tokony hibanjina an’i Jesoa ka hitarika ny olona amin’ny finoana, ka isika Fiangonana dia hanaiky ireo mpitarika ireo.
2) Mijery Azy amin’ny fotoana rehetra, amin’izay atao rehetra. Mila mandrava sakana maro tahaka an’i Zakaiosy izay nandrava ny sakana rehetra, izay tsy nahitany ny Mpamonjy satria fohy kely izy.
Betsaka ny sakana ankehitriny, be ny manahirana tsy hahatongavana amin’ny finoana. Ny finoana dia ny fijerena an’i Jesoa ao anatin’ny zavatra tsy misy nefa antenaina hisy ao anatin’ireny.
3) Midera sy manome voninahitra Azy noho ny asam-pamonjena vitany. Fiainan’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena izany fiderana an’Andriamanitra izany. Manao laharam-pahamehana izany fiderana ny Tompo izany amin’ny maha mpianatry ny Tompo azy.
Mila manahaka ny Zanak’ondrin’Andriamanitra isika amin’ny toetra. Ny ondry dia manana endrika faharetana, fanetren-tena ary fahalemem-panahy.Toetra fanehoana ny maha kristiana ireo. Hita ao amin’ny Romana 12 ny adidin’ny kristiana amin’ny hafa. Tao Roma dia nanindrahindra ny tenany ireo olona tao amin’ny Fiangonana ka nanarin’i Paoly hanana fanetren-tena. Ny finoana dia mila ampiasaina amin’ny fahatokiana an’Andriamanitra ka haneken’ny tsirairay ny fahasamihafana ao anatin’ny Fiangonana mba hisian’ny fiombonana amin’ny finoana hatrany.
Isika rehetra nomen’Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, ka tsy hanana fanetren-tena sy fiombonana isika, raha tsy manana ireo toetra telo ireo dia ny faharetana, fanetren-tena ary fahalemem-panahy.
Koa mijere an’i Jesoa isika, aza menatra mibanjina Azy, aza miherikerika. Maneke hihatsara hatrany manahaka ny toetran’ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra.
B-Mpianatra manaraka an’i Jesoa
Ny andininy faha 37 hatramin’ny faha 39 no entina manazava izany.
Raisina manokana ny and. 37: “Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’ i Jesoa.”
Mamantatra ny toerana misy an’i Jesoa ny mpianatra manaraka Azy: “Raby ô! Aiza Ianao no mitoetra?” (and. 38). Eo no ho eo ny valitenin’ny Tompo fa tsy mampiandry Izy. “Hoy Izy taminy: Avia, fa ho hitanareo.” (and. 39).
Ny tena finoana dia miainga avy amin’ny fahatokiana avy ao am-po, avy amin’ny fifandraisana amin’i Jesoa. Ny mitady ny fonenan’ny Tompo dia mitady ny Tompo ihany. Tsy fantatrao ny toerana misy an’i Jesoa raha tsy mandeha ianao dia mahita hoe eto no misy Azy.
Misy antson’ny Tompo ankehitiny hahatongavana amin’ny finoana. Mila mandeha isika ary mahita. Izay no hahatongavantsika ao amin’ny finoana. Raha hampiharina eo amin’ny fiainantsika izany dia izao: manaraka Azy ka vonona manaiky ny fepetra apetrany. Izany hoe miala amin’ny fankahalana; mila mandeha amin’ny finoana ka tsy mitady tombontsoa manokana ho an’ny tena; mila fiombonam-piainana Aminy amin’ny fotoana rehetra, tsy asiana fepetra.
Ianao ve niala tamin’ny zavatra rehetra ka nanaraka Azy? Nohadinoinao ve ny hevi-diso, ny fahotana sy ny fanadinoina? Nankininao tamin’i Jesoa ve ny tenanao?
Ny ampaherezana antsika dia ny fanarahana an’i Jesoa, tsy mahakivy, tsy mampijaly. Jesoa mahalala fa misy manaraka Azy ary mitodika Izy mijery, mitantana ny diantsika.
Ao anatin’ny fanarahana ny Tompo dia ireto no tadidiana: mitady, manaraka, mitoetra, mahita.
D-Mpianatra mitondra olona ao amin’i Jesoa
Ny andininy faha 42 no anamarinana izany: “Dia nitondra azy ho any amin’ i Jesosy izy.” Efa resy lahatry ny maha Mesia an’i Jesoa ireto mpianatra ireto, ka nandehandeha nanambara izany tamin’ny hafa, nijoro vavolombelona, nahataona mpanara-dia vaovao. Ny efa nahita no mandeha mampahita. Ny olona mandray an’i Jesoa dia mandray fahasoavana, mahazo famonjena ary mizara. Izany no atao hoe kristiana. Mijoro vavolombelona fa efa hitany ny Mpamonjy ka tonga olom-baovao izy. Tsy olona menatra miseho eto amin’izao tontolo izao fa olona hahataona olona.
Firy taona izay no efa nivavahanao ka nahataona olona tao amin’ny Tompo? Efa 50 taona izao ny Hasin’ny Famonjena no nitory an-kira. Firy tamin’ireny toriteny an-kira ireny no efa nahakasika antsika, ka naharesy lahatra antsika hoe hanara-dia ny Tompo, ka nametraka finoana taty anatin-tsika?
Raha sanatria tsy mbola tanteraka izany dia izao no fotoana ampatsahivan’Andriamanitra antsika fa tena mila mijoro isika.
Araka ireo rehetra ireo, hoy ny Tenin’Andrimanitra hoe: “ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy” (Jakoba 2:17).
Tandremo! Aza avela hisy hahasakana anao hanambara izany fahasoavan’Andriamanitra izany, fa notaomina isika ho mpianatry ny Tompo dia tanteraho izany antson’ny Tompo izany. Ny didy lehibe napetrak’i Jesoa dia hoe: “Mandehana ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olona rehetra”.
Mijere an’i Jesoa, manaraha Azy ary mitondrà olona ao amin’ny Tompo. Hotanteraka anie izany hampiorenana ny finoantsika.
Ny mpitarika ny fotoana ihany no nanatanteraka izany.
“Mamy ny Tenin’ny Tompo, tafalentika aty anaty ny hafatra, nefa tsy nahatanteraka ny maro tamin’izany. Maro ny fahasoavana narotsaky ny Tompo, nefa tsy mendriky ny hanonona ny anarany akory. Betsaka ny fiteny sy ny fihetsika izay tsy mifanaraka akory amin’izay lazain’ny vava, koa mifona. Mpiantra sy mpamela heloka Andriamanitra. Noho ny hafatra dia hitady sy hitoetra eo amin’ny Tompo, hampitombo finoana ka hampiorina tokoa ny maha kristiana. Mangataka ny Tompo hitantana, ka hibanjina Azy hatrany ary hanolo-tena indray hanaraka ny sitrapony.
Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 2 ho fanavaozana ny fanoloran-tena.
Nanao ny anjara hirany avy hatrany ny Sampana Taninketsa (STAF).
TATITR’ASAN’NY HASIN’NY FAMONJENA
RAHAJARIZAFY Bakoly no nanao ny tatitra.
“Ankino amin’ i Jehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao. » Ohabolana 16 : 3
Tatitry ny asan’ny Sampana nanomboka ny 6 desambra 2020 hatramin’izao alahady 13 jona 2021 izao.
“Tokana fanantenana”, hira noforonon-dRAKOTOARIVONY Noel, no nohirain’ny antoko mpihira taorian’ny tatitr’asa.
RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Teo am-panombohana dia novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »
Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina hofantarina:
-Tontonsa omaly sabotsy 12 jona ny hetsika fanaovana vaksiny hiarovana amin’ny aretina covid-19 izay nokarakarain’ny Komity Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana. 92 ny mpianakavin’ny finoana vita vaksiny.
Miantso sy manentana ny rehetra izay tsy mbola nanao vaksiny hanatona ny toerana “vaksiny” manerana ny Nosy; sarobidy ny aina sy ny fahasalamana.
-Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana, manaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra;
-Mandritra ny Asa Vavolombelona no nanatanterahana ny famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena;
-Mitohy toy ny mahazatra ny fivorian’ny Sampana isan-kerinandro;
-Mitohy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, manomboka amin’ny 5 ora hariva;
-Manomboka ny alatsinainy 14 jona ny herinandrom-bokatry ny Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana;
-Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 19 jona amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny fiangonana
-Ankatoky ny Fandraisana: alahady 20 jona aorian’ny fanompoam-pivavahana;
-Sampana Taninketsa: mikarakara mofomamy noho ny Fetin’ny ray ny alahady 20 jona;
-Komity faha 160 taonan’ny Fiangonana: fanomanana hetsika gasigasy, fifaninana kabary mahatsikaiky, seho ary filatroana. Ny andinindininy dia hita ao amin’ny pejy Facebook “Fankalazana ny faha 160 taona”. Ny fotoana farany hisoratana anarana dia ny alahady 20 jona.
ANDRIAMASINORO Tantely, Biraom-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana
“Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra ” (Salamo 103:2)
Ny hira FFPM 515: 1 sy 549: 1 no nohiraina tamin’izany.
Ny hira HF 10: 4 « He manolo-tena aho ry Tompoko malalako » no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Notohizina tamin’ny feon-javamaneno.
Famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taona nijoroan’ny Sampana Hasin’ny Famonjena
Hoy ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina hoe: “Eo amin’ny rafitry ny Fiangonana sy momba ny Fiangonana dia jobily mihitsy izao. Koa dia “Jobilin’ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena”.
Nitsangana teny an-toerana ny Hasin’ny Famonjena. Fiarahabana no voalohan-teny nataon’ny Mpitandrina, fa nahatanteraka soa aman-tsara izany taom-pankalazana izany. Ny faharoa dia fahanginana fohy, iray minitra, noho ny fodiamandry ny raiamandreny nitarika ny Komity.
Nivavaka ny Mpitandrina.
Nohirain’ny Hasin’ny Famonjena ny hira fanevan’ny faha 50 taona, “Fitoriana am-pifaliana” noforonin’i IRIMANANA Eninkaja.
Teo am-pitsanganana ihany no nanononan’ireo mpikambana ny teny faneva ary avy eo ny Fiangonana manontolo niredona hoe: “Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana… Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy”.
Nofaranana tamin’ny tehaka izay nanakatonana ny jobily.
Nanohy nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina.
“Nampianatra Ianao Tompo fa mandritra ity volana jona ity dia fanorenana ny maha kristiana ny finoana. Sitrakao Tompo ny nandraisanay ny hafatra sy ny fampaherezana momba izany. Ny mpianatrao Tompo dia tokony hanana fifandraisana sy fifamatoram-piainana Aminao, ka mijery Anao Jesoa Kristy, mitady Anao ary mandray fahasoavana sy mazoto mizara izany amin’ny hafa.
Indreto izahay nandray ny hafatrao sy ny Teninao, ataovy mahatahiry izany amin’ny finoana mba ho hita marika eny amin’ny fiainanay ny maha kristiana.
Mitondra am-bavaka ny mpitondra Fiangonana rehetra, ny mpitory ny Filazantsara tsy ankanavaka, ireo toby masina sy akany fitaizana manerana ny Nosy. Mivavaka ho an’ny Birao Mpiandraikitra Foibe, ny Filohan’ny FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy ; mivavaka ho an’ny Synoda lehibe FJKM izay hatao amin’ny volana aogositra, izay efa nahemotra aman-taonany ny fanatanterahana azy ; mivavaka ho an’ny Sekoly FJKM manerana an’i Madagasikara ; mivavaka ho an’ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana , ny Filoha, ny Birao, ny mpiara-miasa rehetra. Eo am-pelantananao ny Sampana sy Sampan’Asa, Asa, ny Vaomiera rehetra eto amin’ny Fitandremana. Mivavaka manokana ho an’ny Hasin’ny Famonjena eto am-pamaranana izao taon-jobily izao, hahavita dingana lehibe mihoatra noho izay 50 taona lasa izay. Eo am-pelantananao Tompo ireo rafitra rehetra manao fankalazana amin’ity taona ity. Mivavaka ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ary ireo zanany am-pielezana rehetra. Mivavaka ny amin’ny fahasalamana, Ianao hiaro, hanasitrana, homba amin’izay rehetra fikarakarana an’ireo an-dalam-pitsaboana. Fantatrao Tompo fa mahery vaika ity covid-19 ity, maniry izahay ny hiasanao amin-kery. Mivavaka koa ho an’ireo mandalo fahasahiranana mba hahita vahaolana ao anatin’izao vanim-potoana sarotra izao, ireo manan-manjo hahita fiononana sy faherezana. Mivavaka ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny Aminao amin’ny fotoana izay sitrakao. Ireo izay nanefa voady sy nanao raki-pisaorana satria nahatsapa sy nahita ny fitahianao, ny famindram-ponao, na ny eto an-toerana na ny any Ampita, Ianao Tompo hijery sy hitsinjo ireny mandrakariva. Zanakao ireo Tompo, asan’ny tananao, ka raiso ho adidinao mandrakariva.
Izany vavaka izany, dia fifaliana ho anay hatrany ny manakambana azy ho amboara tokana amin’ilay vavaka nampianarinao manao hoe “Rainay izay any an-danitra…”
Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 54: 1-2 « Finoana, fanantenana, fitiavana » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Nohiraina ny hira HF 14 « Haleloia, mihirà fihiram-baovao! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Publié le 7 juin 2021 2 juillet 2021